Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Wadanka Finland oo noqonaya dunida dalkii u horeeyay ee mamnuuca Sigaarka
Wadanka Finland oo noqonaya dunida dalkii u horeeyay ee mamnuuca Sigaarka
Sanadka 2030 ka dalka Finland wuxu noqonayaa meel ka caagan sigaarka.
Laga bilaabo isniinta waxa la yarayn ayaa qiijinta sigaarka. Waxa qofku ku qiijin karaa oo kali ah beertiisa iyo wajihada guriga,adigoo waliba ruqsada ama ogolaansho soo waydiisanaya maamulka degmada, baaburka dhexdiisana qofku kuma qiijin karo haddii uu saaranyahay ilmo 15 jir ka yari.
Sanadka 2020 waxa suuqa laga tirtirayaa Tubaakada,qorsha fog ee gabi ahaanba Finland kaga xoroobayso Tubaakaduna waa 2030ka.
Waxa sidoo kale la mamnuucay waxa loo yaqaan E-Sigarate ama sigaarka Electronic-ka ah.
Talaabadan lagu mamnuucayo Tubaakada ayaa ka dambaysay kadib markii caafimaad darro baahsan bulshadu kala kulantay.
Wadanka Finland oo dhaca waqooyiga qaarada Yurub ayaa noqonaya wadankii u horeeyay ee caalamka ka mamnuuca dalkiisa Tubaakada.
Dalka Finland, Wadanka Finland
Xilalkan badani ma daahirinta nijaastii Eygaa? Xogta Afgambigii Turkiga oo bannaanka timi